कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बिजुली पीडितको पत्र - UrjaKhabar
प्राधिकरण :९९०९ मे.वा. घन्टा
निजी क्षेत्र : ८७३५ मे.वा. घन्टा
भारत : १५५६ मे.वा. घन्टा
माग : २०२०० मे.वा. घन्टा
कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बिजुली पीडितको पत्र
ऊर्जा खबर श्रावण २४, २०७६ 1663
काठमाडौं— तपाईंले दैनिक १८ घन्टाको लोडसेडिङ हटाई देशलाई लोडसेडिङमुक्त गर्नुभयो । त्यसमा सम्पूर्ण नेपालीले लोडसेडिङ गराई कमिसन खाने कमिसनखोर, कालाबजारीया बाहेक मुक्तकण्ठले तपाईंको जयजयकार मनायौं ।
तपाईलाई अहिलेसम्म पनि सम्पूर्ण नेपालीले साथ र सहयोग दिँदै आइरहेका छन् । एलईडी चिम प्रकरणमा तपाईमाथि विभिन्न किसिमका लाञ्छना लाग्दा धेरै नेपालीको आँखा रसाए । तपाईंलाई भीमसेन थापासँग तुलना गर्ने नेपालीको कमी भएन ।
तपाईले एलईडी चिम प्रकरणमा गलत नै गरेको भए पनि नेपालीेले आँखा चिम्लेर तपाईंको समर्थन गरे । सामाजिक सञ्जालका पानाहरू तपाईंको समर्थनमा रंगिए । संसदीय समितिको बैठकमा सांसद अमनलाल मोदीले तपाईलाई भ्रष्टाचारी भनेको विषयमा अधिकांश नेपालीले मोदीको आलोचना गरे ।
कार्यकारी निर्देशकज्यू, तपाईंलाई यो पत्र लेख्नुको कारण के हो भने अहिले मेरो घरको फ्रिज नचलेको करिब एक महिना भयो । फ्रिज बिग्रियो भनी नारायणघाट बजारमा फ्रिज बनाउने ठाउँ खोज्दै हिँडे । प्राविधिकले सम्पूर्ण परीक्षण गरेपछि कुनै समस्या नभएको, ठीक रहेको बयान गरी भोल्टेजको समस्याले हुनसक्छ भनी स्टेपलाइजर हाल्न सुझाए ।
उनैको सुझावअनुसार नयाँ स्टेपलाइजर किनेँ । नयाँ स्टेपलाइजर जोडेपछि फ्रिज त चल्यो, तर केही समय चलेपछि स्टेपलाइजर तातेर काम गर्दैन । अफ गर्यो सेलाउन दियो अनि अन गर्दा बल्ल काम गर्छ । यस्तो समस्या आएपछि पुनः फ्रिज मेन्टिनेन्स वर्कसपमा धाउन बाध्य भएँ ।
उक्त समयमा आफ्नो घर गैंडाकोट भएको जानकारी दिएपछि उनीहरूले गैंडाकोटको विद्युत प्रवाहमा समस्या छ । तपाईंजस्ता धेरै यस्ता समस्या लिएर आएका छन् भनी जानकारी गराए । उनीहरू नै भन्छन्, २२० को भोल्टेज आउनुपर्नेमा १२० पनि आउँदैन । अनि कसरी चल्छ फ्रिज ?
भन्छन, स्टेपलाइजर, जेनेरेटरका व्यापारीले सेटिङ मिलाएका छन्, जताततै अनि कसरी आउँछ स्ट्यान्डर भोल्टेज ? हाम्रो गैंडाकोटमा जसरी नै देशैभरि विद्युत प्रवाहमा भोल्टेजको समस्या भएको मैले महसुस गरेकी छु ।
विद्युत भोल्टेजको गडबडीले गर्दा कतिको फ्रिज, कम्युटरलगायत उपकरण बिग्रिएका हुन सक्छन् । त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? विकसित देशहरूमा अग्रिम जानकारी बिना विद्युत प्रवाहमा गडबडी भयो भने विद्युत प्राधिकरणले त्यसको क्षतिपूर्ति दिन्छ भन्ने तपाईंलाई जानकारी गराइरहन नपर्ला । कार्यकारी निर्देशकज्यू, मैले तपाईको विरोध गरेको होइन । तपाईलाई जानकारी गराउन यो पत्र लेखेकी हुँ ।
पोखरेल, गैंडाकोट नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) की बासिन्दा हुन्, साभार : कान्तिपुर दैनिक, सम्पादकलाई चिठी
आयोगका पूर्वअध्यक्षको प्रश्न, कुलमानजी घरबेटीलाई कसरी कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ ?
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रकाे १७ खर्ब
वैदेशिक लगानीका बाधा
रिमाल, ढकाल, तिमल्सिना र शाक्य चिलिमे सञ्चालक समितिमा
हिमालयन हाइड्रो पावरले साढे २२ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने
रैराङ हाइड्रो पावरको साधारणसभा मंसिर २७ गते
ऊर्जा सम्मेलन सुरु, विद्युत उत्पादन तथा बजार विस्तारमा सघाउने
पूरा भयो माथिल्लो भोटेकोसीको पुनर्निर्माण, १६ गतेदेखि परीक्षण उत्पादन
तल्लो खारेखाेलाले पुसदेखि विद्युत उत्पादन गर्ने, ९५ प्रतिशत निर्माण पूरा
‘डब्लुकेभीका उपकरण जडान गर्दा जलविद्युत उत्पादनमा फाइदै-फाइदा’
राष्ट्र बैंकले लेख्यो– सरकारले रुग्ण घोषणा गरे जलविद्युतलाई एक प्रतिशतमा पुनर्कर्जा